I-Luxury Seaview-Infinity Pool - I-Airbnb
I-Luxury Seaview-Infinity Pool
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAndrew & Nittaya
Ekufikeni kwakho uya kufumana le ndawo yokuhlala etofotofo iphefumla. Yindawo enkulu yokuphumla kwiintsapho, abo batshatayo, umsebenzi kunye nekhefu jikelele.
Inamagumbi amabini okulala e-en-suite kunye ne-balcony enkulu enombono omangalisayo wolwandle we-180 degree kunye nolwandle kunye nedama lokuqubha. ☺
Ipropathi yikona yokuhlala/kwivilla engenamagumbi angaphantsi okanye ngaphezulu. Ndiyithatha njengeyona villa ilungileyo kwiTranquility Bay Residence.
Mhlawumbi eyona ndawo ivulekileyo enkulu kwisiqithi engenazimbono zisithintelo kunye namagumbi abanzi; kubandakanya i-balcony ebukekayo entle. ☺
4.74 · Izimvo eziyi-138
I-Koh Chang sesona siqithi sikhulu kwaye sithandwa kakhulu kwiziqithi ezikwimpuma yeThailand. Ngelixa isayizi efanayo, akukho ndawo ikufutshane njengeSamui okanye iPhuket. Ayinabakhenkethi encinci kwaye iyaziwa kancinci into elungileyo. Yinto etsala abantu abanengqiqo-njengawe-ukuba beze apha.
Zininzi izinto eziza kukugcina uxakekile xa ungazitshisi ilanga; yonke into ukusuka kukhenketho lwesiqithi, indlovu kunye ne-ATV trekking ukuya kwi-scuba diving. Ukuba ufuna ukuphonononga ubumbi besiqithi, bamba isithuthuthu kwaye uhambe ukuze ufumane iingxangxasi ezahlukeneyo ezinokufikelelwa ngokulula ngeenyawo. Kungenjalo, thatha uhambo oluya ehlathini uye phezulu kwenye yeentaba.
Ndiza kubeka isikhokelo seKoh Chang etafileni xa ufika.
Umbuki zindwendwe ngu- Andrew & Nittaya
Ngelixa useTranquility Bay, uya kubonelelwa ngabafowunelwa ukuze bakuxhase kunye neencwadana ezinemifanekiso malunga nezinto onokukhetha kuzo okanye undithumele umyalezo kwaye ndingakuvuyela ukukunceda.
I-Villa iya kucocwa kumgangatho ophezulu ngaphambi kokufika kwakho. Isicakakazi siya kunceda ngokutshintsha ilinen kunye nempahla yokuzalisa. Ukuba ufuna naluphi na uncedo ngexesha lokuhlala kwakho, nceda undithumelele umyalezo kwaye ndiza kwazisa isicakakazi.
Ngelixa useTranquility Bay, uya kubonelelwa ngabafowunelwa ukuze bakuxhase kunye neencwadana ezinemifanekiso malunga nezinto onokukhetha kuzo okanye undithumel…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh chang